Izinombolo Zendaba | Martech Zone
NgoMgqibelo, Okthoba 29, 2011 NgoMgqibelo, Okthoba 29, 2011 Douglas Karr
Ngizwile abantu abahlonishwayo ezinkundleni zokuxhumana abantu bethi, “Ungayinaki i- inani labalandeli unayo." futhi “akunandaba bangaki abalandeli unayo". Abalungile. Ukube bekungenandaba, ngabe asizibalanga. Thina bala konke… Futhi sahlulela wonke umuntu ngezinombolo esizibonayo. Ake ngichaze.
Njengamanje, kunokubuyela emuva kweKlout nezinguquko ze-algorithm abazenzile. Indlela yokushaya amagoli ephathelene nempahla ishintshile nezikolo zabantu beKlout zehlile - iningi laya kushuni cishe ngamaphuzu ayi-10, amaningi ehla aze afinyelela kumaphuzu angama-20. I-Klout ivikela lesi sinyathelo ngokunikeza impendulo yokuthi izinguquko ezintsha ze-algorithm zinikeza inkomba enembe kakhudlwana yethonya lothile eliku-inthanethi.
Abantu abanandaba Ukunemba. Bayabakhathalela izinombolo.
Angikungabazi lokho Izinhloso zikaKlout zazizinhle. Ukwehla kwesilinganiso seKlout ngesonto eledlule kube ngu-71 kuya esikalini seKlout sika-61 kuleli sonto kusho ubuchwepheshe Lutho ngoba inombolo uqobo lwayo imane iyindlela yokubaluleka.
Iqiniso, nokho, ukuthi isibalo samanani siyinto ebibalulekile kubantu abaningi ukuze babambe ithonya labo nokuxhumana kwabo ku-inthanethi. Ukube uKlout ulungise i-algorithm ingcosana ngesikhathi esingaphezu kwezinyanga ezimbalwa, kungenzeka ukuthi bebengeke bakuthole ukubuyela emuva. Kepha uma ngiqondanisa imizamo yami nomuntu ofanayo futhi amaphuzu abo ahlala engaguquguquki kepha okwami ​​kwehlile… ukubonakala kwe- ikhwalithi yesistimu kungena embuzweni. Yilokho okwenzekile ... futhi uKlout manje uzama ukuthola.
Ngokubona kwami, iKlout bekungaba ngcono ukuthi imane inyuse isikali kunokunciphisa amaphuzu. Ukube isikali besingu-100 phambilini, bekufanele bamane basinyuse bafike ku-115. Ukulungiswa bekuzokwenza ushintsho kuzikolo zabantu beKlout lungabaluleki. Ngiyethemba ukuthi lokhu kuzodlula, ngisengumlandeli walokho uKlout azama ukukufeza (yize ngicabanga ukuthi amaphuzu ayingxenye ngoba ayikuthathi ukuseshwa noma izibalo zethrafikhi).
Uma ungakholelwa ukuthi izinombolo zibalulekile, udlala ngawe. Izikhathi eziningi, sinamakhasimende anabalandeli abangu-0, abalandeli abangu-0, ama-retweets ama-0, ukubukwa okungu-0, ukuthandwa okungu-0, njll. Omunye wamakhasimende ethu wakamuva ube nevidiyo emangalisayo online eyarekhodwa ngobunyoninco futhi yanikeza ukubonakaliswa okuhle kakhulu komkhiqizo wabo. Inkinga ukuthi bekukhona cishe ukubukwa okungu-11 kwale vidiyo.
Bambalwa kakhulu abantu abazinika isikhathi sokubuka ividiyo enokubukwa okungu-11.
Ngakho-ke, senze lokho abanye abazokubiza ngakho uhlambalaza. Ngemuva kwezinyanga ezimbalwa nokubukwa okungamakhulu ambalwa, ngiphumile futhi uthenge ukubukwa okungu-10,000 futhi 1,000 ukuthandwa kusuka kusevisi. Akukho emthethweni futhi akwephuli imigomo yesevisi yomuntu. Kuyezwakala shady, noma kunjalo. Kungakapheli amasonto ama-2, ihambise ividiyo ye-Youtube yafika ekubukweni okungu-10,000. Ngemuva kwesonto futhi ividiyo manje ihleli ukubukwa okungaphezulu kuka-12,000 nokuthandwa okungaphezulu kweshumi nambili. Ividiyo efanayo, okuqukethwe okufanayo, manje engeza ukubukwa okungu-2,000 XNUMX ngeviki esikhundleni senqwaba.
Abantu Bathonywe Izinombolo
Abantu abanabalandeli abangu- ~ 50,000 bangangeza abalandeli abangama-50 ngosuku ku-Twitter. Kumuntu omusha ku-Twitter, ukungeza abalandeli abangama-50 ngenyanga kungaba kuhle… kepha lokho ngeke kwenzeke. Angikhathali ukuthi okuqukethwe kwabo kumnandi kanjani… ukukhula komsebenzisi ojwayelekile we-Twitter kuzoba ngokulinganayo kokulandelayo kwabo. Uma befuna ukusheshisa ukukhula kwabo, badinga ukushaya izinombolo zabo. Futhi, abahlanzayo bazophikisa ukuthi ukuthenga abalandeli kunjalo esabekayo. Kulula ngabo ukusho uma sebenezinkulungwane zabalandeli.
Inkinga ngezinombolo ukuthi azihlangani njalo. Ngiyasithanda isibonelo esingezansi… i-akhawunti ezenzakalelayo ku-Twitter. Ayigcini nje ngokuba nomthelela ophakeme kunami, futhi inethonya kuKlout uqobo (okuxakayo ukuthi, inethonya nasekuqashweni nasemakethe yamasheya).
Ukuthandwa Kokubhuloga Nezinombolo
Ukulawula izinombolo kulula. Ngikhumbula lapho indinganiso yegolide yokuthandwa kubhulogi kwakuyinombolo yakho yababhalisile ye-Feedburner. I-Gmail ifike endaweni yesehlakalo yavumela abantu ukuthi babe namakheli e-imeyili anamazwana asekhelini le-imeyili. Isibonelo, uma ikheli lami le-imeyili lithi name@domain.com, ngingasebenzisa igama+1@domain.com, igama+2@domain.com, igama+3@domain.com, njll. Ama-blogger ambalwa abambe lokhu futhi avele abhala imibhalo ukuze abhalise amashumi ezinkulungwane zababhalisile kwi-imeyili yabo ye-Feedburner.
Umphumela? Amabhulogi abo akhule ngokuthandwa ngobusuku obubodwa. Abanye babo baze bakwazi ukuthengisa ukukhangisa nokuxhaswa ngokuya ngezinombolo ezikhuphukile. Njengokuhlolwa, ngithenge okuthunyelwe kwebhulogi kwelinye lamabhulogi futhi ngathola izimpendulo ezingamakhulu ambalwa ngaphandle kwe- amakhulu ezinkulungwane ababhalisile. Kuqinisekisile ukusola kwami. Bebengezelele izinombolo zabo.
Ngemuva kweminyaka, ibhulogi yami isakhula ekuthandeni nasekufundeni. Iba yibhulogi ethandwayo ngamazinga wanoma ngubani. Kepha ... lawo mabhulogi bakhohlisiwe zisengaphambi kwezami kumasayithi amaningi asezingeni. Babenakho okuqukethwe ukwenza isipele ukukhula, ngakho-ke benze kahle. Ingabe angizisoli Ukukopela njengabo? Empeleni, yebo. Ngiyazisola. Kwakufanele ngisebenzise lawo mathuba lapho evela.
Ungathenga Noma Iziphi Izinombolo
Ungathenga noma yini. Abalandeli, Abalandeli, Ama-retweets, Ukuthandwa, Ukubukwa kwekhasi, Ukubukwa kwe-Youtube, ukuthandwa kwe-Youtube… Kukhona izinsizakalo kuyo yonke iwebhu. Ngivivinye ithoni yalezi zinhlelo futhi ezinye zisebenza kangcono kunezinye. Umbuzo wami, ngombono wami, akukhona ukuthi ngabe lokhu kulungile yini noma cha ... umbuzo ungowokutshalwa kwemali. Can izinombolo zokuthenga empeleni ukwandisa ukubonakala nokuthandwa kwemikhiqizo noma izinsizakalo zakho ku-inthanethi? Kwesinye isikhathi… kuya ngokuthi lokho ukukhuthaza kwakho kukubambelela yini!
Nginabangane bami abethukile ukuthi ngikhokhele lezi zinsizakalo, kepha ngemuva kwesonto bacela ukuthi ngiphakamise umcimbi noma umkhiqizo onabo. Kuyaheha… bacabanga ukuthi ngandlela thile akulungile kodwa bese bezama ukufinyelela lapho bengazuza khona.
Ingabe Kufanele Uthenge Izinombolo?
Angikukholwa lokho izinombolo zokuthenga akulungile… kungukutshalwa kwezimali kokukhangisa njenganoma yini enye. Inkinga ukuthi uzokwazi ukusebenzisa imali kulolo tshalo-mali noma cha futhi unikeze okuqukethwe okwaziyo ukukhulisa okulandelayo. Uma ungakwenzi, ulahlekelwe yimali. Akunabungozi, akukho ukungcola komunye umuntu okwenziwayo… ngaphandle kwe-pocketbook yakho.
Qaphela: Ngiyakholelwa ukuthi kunjalo ukukhwabanisa ukuthengisa ukukhangisa ngokuya ngezinombolo owaziyo ukuthi azizona ezangempela.
Abantu abaningi bazophikisana nami ngokuqinile ngalesi sihloko. Kuyini ukukhangisa nokumaketha kumongo wayo? Uma yonke into incike ekukhuleni okungokwemvelo, sonke besingeke sisebenze embonini yezentengiso.
Ngabe ngikhohlisa ukuthandwa nokuziphatha kwabathengi uma ngi thenga abalandeli? Yebo!
Ngabe ngikhohlisa ukuthandwa lapho ngiqasha umqambi onguchwepheshe ukuze athuthukise umkhiqizo ukuze abonakale njengenkampani enkulu kakhulu kunalokho eyikho? Yebo!
Ukumaketha kumayelana nokwakha isithombe ekhanda lamathemba ukuthi badinga insizakalo yakho. Ukumaketha kuphathelene nokusizakala ngokuziphatha kwabathengi ukwandisa imiphumela yebhizinisi. Angikwazi ukusiza ukuthi iningi labantu alinaki izinombolo ezincane… Kepha ngiyakwazi ukushintsha izinombolo ukuze zinake!
Ukumaketha kungenisa abantu emnyango wakho. Kungumthwalo wakho ukwenza setha okulindelwe futhi ukudlule namakhasimende akho. Uma ukumaketha kwakho kubeka okulindelwe ongeke ukugcine, ngabe uqamba amanga futhi akulungile. Kepha uma uthenga inqwaba yokubukwa kwe-Youtube, ividiyo yakho iyahamba, bese uthengisa ithani lomkhiqizo kumakhasimende ajabule ngenxa yayo, bekungukutshalwa kwemali okuhle kakhulu.
Ukutshalwa kwezimali kwethu kulezi zinsizakalo akuvamile. Kuphela lapho sisebenza nomuntu, umkhiqizo noma insiza lapho sazi ukuthi kuzokwenza kahle lapho sitshala khona imali. Noma lapho sisebenza neklayenti elidinga ukuthola ukukhushulwa emhlabathini ngokushesha. Kuzo zonke izimo, imvamisa sisebenzisa izinsiza njengesiqalo sokubakhulisa. Lapho sezikhulile, asikho isidingo sokuqhubeka.
Ungamangala ukuthi isebenza kahle kangakanani - ngingakukhuthaza ukuthi uzame ngokwakho… Thenga 5,000 wento ethile bese ubheka ukuthi ikusheshisa kanjani ukukhula.
I-Oct 29, i-2011 ku-8: i-13 PM
Kuyakholisa kakhulu. Kepha kuthiwani ngokuthenga izibuyekezo zezinkanyezi ezi-5?
I-Oct 29, i-2011 ku-10: i-36 PM
Okuxakayo ukuthi amaphakheji amaningi wokubuyekeza anikela ngezibuyekezo zesitoko zisuka nje kululwane. Isisusa sami ngenhla nje ukuthola inkampani ize ifike lapho umphakathi ungathatha khona izintambo. Ngingeza ukuthi lena akuyona iqhinga lethu kuphela. Ngokufana nalokhu kukhushulwa, empeleni senza ukukhushulwa kwangempela - sicela abacindezeli ukuthi benze izibuyekezo ngomkhiqizo. Asibakhokhele ukuthi baqambe amanga ... empeleni sihlinzeka ngomkhiqizo bese sivumela ama-chip ukuthi awe lapho kungenzeka khona. Ngikholwa ukuthi ukubuyekezwa komkhiqizo kungukugunyazwa okuningi kune- "inombolo" elula.
Ngingeza futhi, ukuthi abantu abaningi abaphenduli kahle kuzibuyekezo zezinkanyezi ezi-5. Ngangisenkomfeni eminyakeni eyedlule lapho abakhiqizi bemikhiqizo bathi izinombolo ezinkulu zezibuyekezo zezinkanyezi ezi-5 empeleni zehlise ukuthengisa. Abantu bathenga imikhiqizo yezinkanyezi ezi-4 ngemuva kokubheka ukuthi yini engaphelele ngomkhiqizo. Ukube bekuyinto engabakhathazi, bebezothenga.
Ngenye i-nuance ethokozisayo yokuziphatha komthengi.
I-Oct 29, i-2011 ku-11: i-06 PM
Siyabonga ngempendulo ecabangayo. Kuyiqiniso: kukhona umgoqo we-phantom odinga ukuweqa ngaphambi kokuba uthathwe ngokungathí sina ngabantu ongabazi. Isibalo sabalandeli yisudi nothayi bokumaketha.
Yize kunjalo ngivele ngikuthole kunjalo… icky. Ngicabanga ukuthi ngabe abantu bazizwa ngaleyo ndlela mayelana nokukhangisa ngenkathi lokho kwakungathuthukisiwe kangako? Njengokuthi, "kungani ngingatshela abantu ukuthi umkhiqizo wami mkhulu kangakanani, lokho kungamanga?"
I-Oct 29, i-2011 ku-11: i-20 PM
Ngicabanga ukuthi "icky" kuyindlela enhle yokuyichaza. Kubonakala kimi ukuthi kulezi zinsuku kungububi obudingekayo. Futhi lezi zinsizakalo ziyaqhuma… ngakho-ke othile uyazisebenzisa!
Okthoba 30, 2011 ngo-8: 35 AM
Amagama amasevisi nezintengo ezithandwayo?
I-Oct 30, i-2011 ku-4: i-55 PM
Ungangitshela ukuthi ngangizama ukukugwema lokho, Kenan? 🙂 Ngibe nenhlanhla kwaSocialkik nakuRetweet.it - ​​womabili abika ngokusobala futhi anikele ukwesekwa nempendulo.
Okthoba 30, 2011 ngo-11: 49 AM
Njengomuntu wokumaketha nowebhizinisi ngiyavumelana nesimo sakho mayelana nokuthengwa kokuthandwa, ukubukwa, nokubeka +1 njengokutshalwa kwezimali. Kunemisebenzi eminingi yokumaketha endaweni engeyona eyedijithali eyenza into efanayo. Imincintiswano ngemiklomelo, ukuthatha izinhlolovo ngezikhuthazo, amakhuphoni - konke lokhu kuhlose "ukuthenga" isikhathi, ukunakwa, nokuzibandakanya.
Kepha udonselwa kuphi umugqa? Isenzo sokuthenga ukuthanda, ukubuka, nokubeka +1 kungonakalisa ukwethembana. Ngabe iklayenti lakho elinevidiyo emangalisayo lingavuma ukusho esidlangalaleni ukuthi likuthengile ukubukwa? Ngisola ukuthi impendulo ithi cha ngoba lelo klayenti linezinga elithile lokuthembela elakhelwe ngesisekelo samanje samakhasimende abengeke athande ukulichitha.
Esinye isibonelo: Ukubuyekezwa kwezindawo zeGoogle kungathengwa kumasayithi afana neFiverr (http://fiverr.com/ noma i-Elance (https://www.elance.com/ ). Akukho okudumaza kakhulu ukuba khona kwi-inthanethi futhi ungazibuyekezi. Mina, njengomthengi, ngizoqhubekela nakwelinye ibhizinisi lapho ngifuna indawo yokudlela. Kepha uma ngibona indawo yokudlela enezibuyekezo ngizozifunda bese ngithatha isinqumo. Uma ngithola ukuthi ukubuyekezwa kubhalwe ngabantu abangakaze bakuzame ukudla noma bangene unyawo endaweni bengingazethembi uhlelo (ngaphezulu kulo mqondo ku-http: //agtoday.us/vyVjXn).
Kukhona futhi i-engeli yezomthetho okufanele uyicabangele: Bheka imihlahlandlela elawula i-US Federal Trade Commission (FTC) elawula ukugunyazwa nobufakazi (http://www.ftc.gov/opa/2009/10/endortest.shtm ). Kungaphikiswa ukuthi ukuthenga ukuthandwa ukuthenga isincomo futhi ngaleyo ndlela kufanele kudalulwe. Uma kungekho ukudalulwa umthengi ofanayo usengozini yokuchayeka enkantolo nasezinhlawulisweni.
Njengomholi wokucabanga (yebo, ngikuthatha njengomholi wokucabanga, ungabeka lelo qwembe emnyango wehhovisi lakho :), ubhekwa njengomthombo _trusted_ wokuqonda nobungcweti. Ukuthi ubhale le ndatshana kuyasisiza ukuthi siqonde isisekelo sokumaketha, ukukhangisa nobudlelwano bomphakathi. Ngiyethemba awuthengi ukuthandwa ngaso sonke isikhathi :)
Inothi eliseceleni: ingabe ikhona ifomula engaguquguquki / isilinganiso / ijika okufanele ibhizinisi licabangele maqondana nokuthi lithengwe nini ukuthola leyo "misa yokuxhasa ebucayi" bese iyeka ukuthenga?
I-Oct 30, i-2011 ku-4: i-51 PM
Kulabo bantu ngaphandle lapho abachitha ngokuphelele umbono wokuthi ukuthenga abalandeli, njll, kubi ngokwemvelo, ngithanda ukunikeza isifaniso esingashintsha izingqondo zabo. Asidideki lapho uBudweiser, uCoca Cola, uNike, uFord, zonke izinkampani ezinkulu, bechitha izigidi kwisikhangiso esisodwa seSuper Bowl. Ngabe leso sikhangiso "sathola" ilungelo lokusakazwa, ngokususelwa ekuqhumeni komphakathi kwezokuxhumana? Cha, bamane bathenga. Iqiniso ukuthi thina njengabathengisi senza izinto ukusiza amaklayenti ethu, abaqashi, ukuthengisa izinto eziningi.
Sibhekene nokuncane kukaDkt Jekyll noMnu Hyde isikhashana kuzo zonke izinto zenhlalo. Ngakolunye uhlangothi, kwesinye isikhathi sifuna ukugcina ukuhlanzeka kokuhlangenwe nakho komphakathi, nokho asiboni iso lapho sisebenzisa imisebenzi engaphansi kokulunga yokumaketha ebonakala yephula umoya nenhloso yalokho okushiwo yimithombo yezokuxhumana.
Futhi ngicabanga ukuthi iningi lozakwethu lisabambeke emcabangweni wokuthi ukuba nezithameli eziningi ngandlela thile kusho udumo, ukwethenjwa, nazo zonke ezinye izinto.
I-Oct 30, i-2011 ku-4: i-53 PM
Yebo siyazi ukuthi abathengi babhajwe kulowo mqondo, iMarty!
I-Oct 30, i-2011 ku-8: i-19 PM
Ngabe ukuthenga okubanzi njengama-RTs, nokubeka +1 kusiza kanjani izimboni ze-niche? Izinsizakalo okhulume ngazo azikwazi ukugxila kunoma yiliphi iqembu elincanyana, zisho njengamavetshi amancane wezilwane ezihamba phambili noma abahamba ngezinyawo.
Ngabe indlela yezimboni ze-niche kungaba ukufuna ukusebenzisa amandla okuthenga ngenani elibanzi lenyuke ngenkathi kuthuthukiswa isakhiwo esincanyana nesincane ngokusebenzisa ezinye izindlela zokuxhumana?
I-Oct 30, i-2011 ku-8: i-53 PM
Angazi ukuthi noma ngubani ucwaninga lapho ukuphindaphindwa noma ukuthanda kutholakala khona, ngakho-ke anginaso isiqiniseko sokuthi kubalulekile ukuthi ngabe okubhekiswe kukho kuyinto ebanzi noma ebanzi. Inzuzo yengxenye ye-niche, ngicabanga, ukuthi kungenzeka kungalindelwa imiqulu emikhulu efana nesihloko esibanzi.